Posted on July 31, 2018 July 31, 2018 Author Myat Moe	Comment(0)
Posted on July 3, 2017 Author
အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ စွန့်ဦးတီထွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ဖို့ နည်းလမ်းကောင်းတွေက….
အလုပ်ခွင်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ဘယ်လိုနေမလဲ။
Posted on September 11, 2017 Author Windy
လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေ အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ပြီးဆုံးနိုင်ဖို့ဆိုရင် ကိုယ်လုပ်နေရတဲ့ အလုပ်ခွင်မှာ ပျော်မွေ့နေဖို့ကလည်း အဓိက ကျနေပါတယ်..
တက်လမ်းကိုရှာနေတဲ့ လူငယ်တွေအဖို့ မှန်ကန်တဲ့အလုပ်အကိုင် ရွေးချယ်ဖို့ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေလည်း စပြီးလုပ်တဲ့အချိန်တုန်းက တက်ကြွပါရဲ့ နောက်ပိုင်းကျ ငြီးငွေ့လာတာမျိုး ရှိပါတယ်။ အဲ့လိုဆိုရင်…ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် စမ်းစစ်ကြည့်ရမှာက လုပ်သက်ကြာလာလို့သာ…ခဏတာ ညည်းညူမိနေခြင်းလား….ဒါမှမဟုတ် လက်ရှိအလုပ်ဟာ..ကိုယ့်အတွက်မသင့်တော်တဲ့ အလုပ်ဖြစ်နေတာလား ဆိုတာပါပဲ..။အလုပ်ကထွက်သင့် မထွက်သင့် ဝေခွဲမရဖြစ်နေရင်တော့…အောက်ကအချက်လေးတွေကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ကြည့်ပါ။ (၁) အလုပ်မှာသင်ယူစရာမရှိရင် အလုပ်မှာငြီးငွေ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရင်းက…..အလုပ်ကနေ ဘာမှသင်ယူစရာမရှိတဲ့အခါမှာလည်း ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ လစာကလည်း အရေးကြီးတယ်ဆိုပေမယ့် သင်ယူစရာမရှိတဲ့အခါမျိုးမှာ ကိုယ့်ဘဝတက်လမ်းမှာ ဒုက္ခတွေ့နိုင်ပါတယ်။ လုပ်သက်သာကြာတယ်…တကယ်အလုပ်လုပ်ရတဲ့ အတွေ့အကြုံ မရှိဘူးဆိုရင်တော့….အဲဒီအလုပ်ကနေ ထွက်လိုက်ပါ။ (၂)ရာထူးတက်ဖို့ အခွင့်အရေးနည်းရင် ကိုယ်ကြိုးစားပမ်းစားလုပ်တဲ့အရာတစ်ခုမှာ ရလဒ်ကောင်းတစ်ခုတော့ ထွက်သင့်ပါတယ်..။ တစ်ခါတစ်လေ ကုမ္ပဏီတချို့က ကိုယ်ကသာ ကြိုးစားပမ်းစား လုပ်နေတာ…ရာထူးရာခံ အကြီးအကဲနေရာအတွက်ကျ အရည်အချင်းပြလက်မှတ်တွေ ကိုင်ထားသူတွေကိုသာ…ခေါ်ခန့်ထားကြပါတယ်။ ဒီလိုအလုပ်မျိုးဆိုရင်တော့ ကိုယ်ကြိုးစားလည်း အလကားမို့ ထွက်သင့်ပါတယ်။ (၃)တခြားနေရာမှာ ပိုမိုကောင်းတဲ့ အခွင့်အရေးရှိရင် အလုပ်တစ်ခုပေါ်မှာ […]
Posted on January 22, 2019 Author Sugar Cane
ပြည့်နေသောဘီရိုနဲ့ ဝတ်စရာမရှိသောနေ့ရက်များ ထပ်မဖြစ်ရလေအောင် ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲ?
Posted on January 22, 2019 Author Hnin Ei Oo
ချွေးပေါက်တွေကို ကျဉ်းသယောင်ယောင်ဖြစ်စေမယ့် အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်း ၅ မျိုး